Tatitra avy amin’ny Fihaonan’ny Bilaogera Jôrdaniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 17:46 GMT
Tsy fantatrao mihitsy izay olona hipoitra any amin'ny fihaonanà bilaogera. Tsy vitan'ny hoe lasa sasany amin'ireo bilaogera tsara indrindra ao Jôrdania fotsiny ny fihaonan'ny bilaogera Jôrdaniana – ezaka iraisan'ny Jordan Planet/Global Voices – fa lasa kintana goavana avy ao Bahrain sy Egipta ihany koa. I Ammar Ibrahim, i Roba Assi an'ny And Far Away, i Nader Shnoudi, i Jad Madi, i Ahmad Humeid an'ny 360east, i Hind Sabanekh, i Rai'da Al-Zu3bi, ary i Isam Bayazidi mpamorona ny Jordan Planet, no nisolo tena an'i Amman (renivohitr'i Jôrdania). Nody avy nitsidika an'i Utah kosa ilay Jôrdaniana Iyas Masannat sy ny vadiny. Nisolo tena an'i Egipta an-databatra i Mohammed Sameer, mpikatroka mafana fo mampiasa loharano misokatra, ary nitondra fomba fijerim-paritra tao amin'ny vondrona kosa i Haitham Sabbah, bilaogera Jôrdaniana tranainy mipetraka ivelan'ny tanindrazana izay manoratra bilaogy avy ao Bahrain.
Iray tamin'ireo lohahevitra lehibe indrindra noresahina ny famokaran'i Haitham bilaogy marobe izay tena mampihaiky – rehefa nanontany bilaogera mba hanoratra ny rohin'ny bilaogin-dry zareo aho, nanoratra bilaogy enina i Haitham – anatin'izany ny palestineblogs.com, ny arablogger.com ary ny NoToTerrorism.com – talohan'ny niatoany ary nitenenany fa “ireto angamba no lehibe indrindra”. Nampisalasala be ny fananan'i Haitham asa “tena izy”, mandra-pamoahany karatra ara-pandraharahàna, sy nanazavàny fa miasa valo ora izy, manoratra bilaogy mandritra ny 12 ora ary matory adiny efatra.
Nisarika ny saina ihany koa ireo lohahevitra matotra kokoa, toy ny fahitàna fa saika voafetra ho an'ireo mponina mampiasa teny roa ao Amman ihany ny fanoratana bilaogy ary tsy niparitaka ivelan'ny renivohitra mankany amin'ireo tanàndehibe faharoa sy ireo faritra ambanivohitra. Mahaliana ny ankamaroan'ireo bilaogera Jôrdaniana ny fikarakaràna ezaka fanairana ireo faritra ambanivohitra amin'ny alàlan'ny foiben'ny vondrompiarahamonina ahafahana miditra Aterineto, mampirisika ny olona hanoratra bilaogy momba ireo hetsiky ny vondrompiarahamonina, izay mety hampiasa bilaogy an-tsary sy feo mba hiantefan'ny ezaka eny amin'ireo mpandray anjara tsy dia mahay manoratra sy mamaky teny. Noresahiko fohifohy ny fomba nanampian'ny torolàlana momba ny fanoratana bilaogy natolotr'i Hossein Derakshan tamin'ny teny Farsi hitarika hetsipanovàna ny bilaogy tao Iran, ary nisy fahatsapana iraisana fa ilaina ny fampahafantarana tsara amin'ny teny Arabo ny fomba sy ny antony hanoratana bilaogy, mifantoka amin'ireo Jôrdaniana ivelan'i Amman. Hahaliana tokoa ny hijery ny vokatr'ity adihevitra ity anatin'ny volana vitsy ho avy.